I-21 YETEMPLE YOKUCOCA IINWELE EZIPHAMBILI: IZITAYILE EZIPHOLILEYO ZETEMPILE UKUZE UNGENE KWI-2021 - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ukuphela kweenwele zeTemp
I-temp fade haircut, ekwabizwa ngokuba yi-temple fade okanye iBrooklyn fade, yenye yeentlobo ezithandwa kakhulu ngabantu. Kunye nolusu oluphezulu ...
I-temp fade haircut, ekwabizwa ngokuba yi-temple fade okanye iBrooklyn fade, yenye yeentlobo ezithandwa kakhulu ngabantu. Kunye nesikhumba esiphakamileyo sokucheba kweenwele, izitayile zokuphela kwale tempile zinika abafana ithuba lokuzama ngokwahluka kwetade classic. Nangona i-temp fade ngokwesiko yayiqhelekile kuphela kukucheba iinwele zamadoda amnyama, uyilo oluyingqayizivele kunye nesitayile sele lukhangeleka lupholile olunikezelwa ziindawo zokucheba iinwele kwihlabathi jikelele.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nokucheba kweenwele zetempile okanye ufuna nje ukubona ukuba ingabonakala njani nge-afro, i-faux hawk, i-wave, okanye enye iinwele zamadoda, jonga isikhokelo sethu esimangalisayo kwezona ndawo zilungileyo zokuphelisa iinwele zamadoda!
1Yintoni isiPhelo esiPhelayo?
MbiniUngasifumana njani isiPhelo seTemp
Yintoni isiPhelo esiPhelayo?
Eyona ndlela ilula yokuchaza ukuphela kwetempileni kukucinga ukuba ulusu oluphezulu luphela ngokumila. I-barber yakho iya kutshabalalisa iinwele zakho ukuya kwiitempile zakho kunye nesayizi esincinci se-clipper, kwaye usebenzise i-trimmer okanye i-razor ukusika imiphetho ebukhali kwizinwele zakho. Oku kubukhali kukhokelela kumgca ococekileyo nohlaziyiweyo oqaqambisa izidlele zobudoda zendoda kunye nobuso obunqamlezileyo.
Ngenxa yokucheba okucokisekileyo okufunekayo ukuze iinwele ziphele, sicebisa ukuba ufumane iinwele zakho kunye nomchebi onamava. I-stylist enetalente iya kuqinisekisa ukuba i-temp fade yakho ihamba ngokugqibeleleyo kunye nokusikwa kwakho.
Ungasifumana njani isiPhelo seTemp
Ukuba unomdla malunga nendlela yokufumana ukuphela kwetempe nge-afro yakho, faux hawk (fohawk), uloyiko , okanye ukujija , eyona ndlela ibalaseleyo kukubonisa umchebi wakho kanye ukuba yeyiphi indlela oyifunayo! Ngenxa yokuba iinwele zexeshana zivumela uyilo lweenwele ezahlukeneyo, siqokelele ingqokelela yetempile ekhangeleka ishushu. Jonga imifanekiso yethu yokufiphala kweenwele zokuphefumlelwa!
Ukuchetywa kweenwele zenkwenkwe eneminyaka emi-3
iinwele zamadoda aneenwele ezinde
mens high fade iinwele
iinwele zamakhwenkwe aselula
ukucheba kweenwele zenkwenkwe encinci